I-Adobe yeNtlalo kunye neLifu lokuThengisa leAdobe | Martech Zone
Xa iAdobe yenza ukuthengwa kweOmniture, ndandixhalabile ukuba bazakuyeka kwi kubahlalutyi ngaphambili kwaye iimveliso ziya kulahleka phakathi kwezixhobo zabo zokupapasha. Njengoko sisebenza ngakumbi nangakumbi kubathengi kwaye sibona iAdobe yeNtengiso yeDijithali yokuhlangana inyani, ndiyaqala ukutshintsha imond yam. Uvavanyo kunye nokujoliswa liqonga elihle kunye nokudityaniswa okungagungqiyo kunye nokusebenziseka okuqhelekileyo kwi-Analytics kuyenza ukuba inyanzelekile.
Okulandelayo yi-Adobe Social. Ukuba ungumsebenzisi weAdobe Analytics, iAdobe yeNtlalontle intle kakhulu.
I-Adobe yeNtlalo yimveliso enye yokulawula imisebenzi yentengiso yentlalontle ukuphela-ukusuka ekuthengeni intengiso, ukupapasha abalandeli kunye nabalandeli, ukuqhuba ukuzibandakanya nokulinganisa iziphumo zeshishini. Ayibonisi isisombululo esinye kuphela kwimicimbi ephambili yeshishini yentengiso, kodwa imveliso enesibonelelo sokudityaniswa ne- Ilifu lokuThengisa leAdobe ukuzisa imilinganiselo yamajelo amaninzi kunye nokwenza ngcono kumxube. Isuka e Ibhlog ka-Adobe.
Uluhlu lwe-Adobe ludwelisa izibonelelo ezininzi zeAdobe zeNtlalo:
Bonisa imithombo yeendaba kwi-ROI Shenxela ngaphaya kokuthandwayo kunye nezabelo ngokudibanisa imisebenzi yentlalontle kwiimetriki zeshishini kunye nokuchonga ukuba loluphi unxibelelwano ekuhlaleni olunefuthe ekuziphatheni kokuthenga kunye nexabiso lophawu.
Lungiselela ukuthengisa kwakho ngombono wokuphela kokuphela komthengi -Sebenzisa ukuqonda ekuhlaleni ukuqonda ngcono imisebenzi yabathengi kunye neendlela. Yenza amava okuthengisa ngokobuqu ukufikelela kumntu olungileyo
Ukuphucula ukusebenza kweenkqubo zolawulo lwentlalo Ukunyusa amanqanaba okuhamba komsebenzi kumanqanaba okubandakanya abaphulaphuli kwihlabathi liphela kunye nokuphendula kwincoko yabathengi kwalapha ngelixa ulinganisa ulawulo kunye nolawulo kulawulo lombutho wonke.
tags: Indawo yokuthengisa yedijithaliI-adobe yentlalouhlalutyo kwimidiya yoluntu
Ukubeka iliso kwimidiya yoluntu eBrandwatch